Igumbi lakho lokulala yiRed Roof Farm shamlech Barog - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala yiRed Roof Farm shamlech Barog
Ifama sinombuki zindwendwe onguVandana
Ikhaya elisekhaya liyakwamkela kwenye yezona ndawo zikhethekileyo oza kuzibona kuMntla weIndiya.
Apha, igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle lenziwe ngeVedic plaster endaweni yesamente okanye izitena eziqhelekileyo kunye neendonga zezindlu. Oku kunceda amaqondo obushushu alawuleke ngokwemozulu etshintshayo, nto leyo eyenza kubanda ehlotyeni nasebushushu ebudeni bobushushu.
Eli ligumbi elisandul 'ukwakhiwa apho iindwendwe zinokonwabela ukubona intlambo iSolan-Barog ngaphandle kokuphazamiseka ecaleni kwendlela ephakamileyo eShamreon.
Lonke igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linokusetyenziswa ziindwendwe kuphela. Ilungele usapho olunabantwana ababini. Abantwana bangasebenzisa i-sofa-cum-bed, oko kukuthi i-9 x 6 feet.
Unokonwabela igadi yabucala kwaye ukwazi nokubona igadi entle evulekileyo esetyenziswa nangabanye abantu enezityalo neentyatyambo ezintle kwaye yindawo yokuzingela iintaka ezahlukahlukeneyo zaseHimalaya. Ijikelezwe ziifama, yindawo epholileyo yokuphumla nokuvuselela amandla akho. Ukudlala ngololiwe waseKalka-Shimla ngasemva yinto ethandwayo ngasemva.
Ungabona nezityalo ze-Apple ne-Plum egadini yethu.
Uza kufumana nekhitshi elincinci, liyasebenza ngokupheleleyo, apho uza kufumana phantse yonke into kwaye ukuba kuyimfuneko sinokulungiselela i-microwave, izixhobo.
Siyayithobela imigaqo yococeko eqhelekileyo size sisebenzise izinto zokubulala iintsholongwane eziphambili njengoko kucetyiswa Ngumbutho Wezempilo Wehlabathi (iWHO) kunye neSebe Lezempilo Nentlalo-ntle (MoreonW) kuzo zonke iindawo ezichukumisayo ukuze wonke umntu akhuseleke kwaye abe sempilweni.
IZIKHOKELO ZOCOCEKO NEZOKHUSELEKO
• Ukucoca okunzulu kwamagumbi ngaphambi kokungena ngakunye!
• Ukunciphisa iintsholongwane kwiindawo eziqhelekileyo ezifana neendawo zokulayita, imiqheba yamacango, iirimowuthi, imiqheba, njl.
• Amashiti acocekileyo kunye nezinto zangasese zibekwa ngaphambi kokungena ngakunye.
• Abasebenzi bagcina umgama ofanelekileyo njengenxalenye yemigaqo kunye nokunxiba iimaski.
• Abasebenzi bethu basoloko behlamba izandla kwaye bebeka iliso lobushushu.
• Amagumbi anebhedi elala abantu ababini okanye ibhedi enkulu enendawo yokuhlamba.
• Ixhotyiswe ngeWiFi enesantya esiphezulu, i-cable TV, oomatrasi abatofotofo.
• Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linegumbi lokunxitywa elinamakhabhathi.
• Iifenitshala ezinjengezitulo, iitafile ezisecaleni kwebhedi nezibane, itafile yokufunda, amashiti ebhedi, njl. zilungiselelwe ngokuqwalasela iinkcukacha zokukhupha izinto ezitofotofo.
• Amagumbi awaphelelanga ngomoya, sineefeni zesilingi.
igumbi lokuhlamba • Inegumbi lokuhlambela elixhonywe phezulu kunye nezinto zale mihla.
• Ixhotyiswe ngee-geysers zamanzi, iitawuli, ishampu kunye nezinto zokuthambisa ezisisiseko.
• Ezi ndawo zigqitywe kakuhle ngokufaka amanzi ashushu nabandayo ayi-24 x 7.
• Ukutya kwe-Al Fresco kunokulungiswa xa ifunwa kakhulu ngokukhethekileyo ehlotyeni.
• Zonke izidlo ziya kuhlawuliswa ngokwendlela esetyenziswa ngayo. Kufuneka waziswe kwangaphambili uze ubhatale ukuze ulungiselele ukutya.
• I-bar-be-que ingalungiswa ngokuxhomekeke ekufumanekeni kwemali ebizwayo.
• Ukutya okuqhelekileyo/kwe-Pahari/kwasekuhlaleni kunokusetyenziswa ngokufunwa kweendwendwe.
• Umlilo neendawo zomlilo zingakhanyiswa xa kucelwa imali eyongezelelekileyo.
• Umculo odlalwayo unokubonelelwa ngokukhethekileyo xa ucinga ngenani leendwendwe. Uza kubhataliswa enye imali.
• Kwakhona izinto onokuzisebenzisa ezinjengamavili, iketile yombane, njl. ziyafumaneka kumagumbi.
• Ingcamango yefama ukuya etafileni inokuba namava apha. Sineefama zemifuno neziqhamo (iitomato, ii-capsicums, i- broccoli, iiplatifomu, ii-apricot, ii-walnuts, i-bayylvania, oko kukuthi, i-kafal), apho unokuza uze uqhakaze ngamaxesha athile onyaka...
Sisekude ngeekhilomitha eziyihafu ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseBarog kwaye le ndawo ibizwa ngokuba yiShamlech. IBarog sisikhululo seenduli kwisithili saseSolan eHimachal Pradesh. Isikhululo sikaloliwe silapha kwi-UNESCO World Heritage Site Kalka-Shimla Rail. IBarog iza emva kwee-tunels eziyi-32. Umphezulu wepine ojinga kakhulu kancinci uye emacaleni ukuze uveze indawo yokungena engunombolo 33 (eyona nto itsala umdla kwesi sikhululo). Le yeyona ndlela inde ethe tyaba kwiitreyini kwaye inobude obuziikhilomitha eziyi-1 1.14.
Isikhululo sikaloliwe saseIndiya asiyiyo. Ayinyanisekanga, icocekile, ayinabantu banintsi. Umsebenzi wamaplanga luhlaza kakhulu kunye nomphandle wehlathi.
I-Mall Road, nezinye iimarike zinokufumaneka lula ngeebhasi zasekuhlaleni, ii-autos okanye iirhafu. Kunzima ukuhamba imizuzu eyi-30 ukuya esixekweni ukuba unomdla.
Sikholelwa ukuba indawo yethu idlala indima enkulu kuye nabani na ukuba agqibe ngokubhukisha indawo yokuhlala, ngaphandle koko, sineendawo zemifuno neziqhamo kwaye iindwendwe zethu zivumelekile ukuba zibuke ezi ndawo
Kukho iindlela ezininzi zokuhamba ezikufutshane zeendwendwe ezifuna ukunyuka intaba nokunyuka intaba. Isikhululo sikaloliwe i-Barog (uhamba nje imizuzu eyi-15), itempile edumileyo ye-Jatoli (malunga nemizuzu eyi-20 xa uqhuba), iMount Karol (malunga nemizuzu eyi-15 xa uqhuba kwaye ulandelela okanye uqhube de kube yiKarol), isikhululo saseHill Kasauli (malunga nemizuzu eyi-40 xa uqhuba) Isikhululo saseHill Chail (malunga nemizuzu eyi-90 xa uqhuba) zezinye iindawo ezidumileyo ezikufuphi nase.
Umbuki zindwendwe ngu- Vandana
Olu luhlu olulawulwa ngobungcali. Umamkeli uVandana Mehta kunye nomququzeleli wethu u-Ankit Khurana osuka eKhaya-Zoned banobubele kakhulu kwaye bayangeneka, kungoko ungalibazisi ngokusibhalela ngokucofa iqhosha elithi "Qhagamshelana noMmkeli".
Umnini kunye nabasebenzi bahlala kwipropati ukuze bavelele ukukhululeka kunye nokuthuthuzela kweendwendwe.
Olu luhlu olulawulwa ngobungcali. Umamkeli uVandana Mehta kunye nomququzeleli wethu u-Ankit Khurana osuka eKhaya-Zoned banobubele kakhulu kwaye bayangeneka, kungoko ungalibazisi ng…